Sheeko gaaban – dhugasho
Waa mar kale iyo taxenihii ahaa “Rag waa raggii hore, hadalna waa intuu yidhi.” Waxaan maanta soo qaadanaynaa sheeko ka mid ah sheekooyinkii badnaa ee lagu qaadan jiray dugsiyadii Soomaaliya. Waxaa sheekadan gaar ahaan lagu baran jiray fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waa sheeko diin iyo qosolba leh. Waxay sheekadu ahayd sidan:
Wuxuu ku barbaaray miyiga, waligiina magaalo subax kama soo toosin. Xoolaha dhaqaalahooda ayuu aad u yiqiin, nolosha miyigana meel fog ayuu ka gaadhay. Magaalada haddii wax looga baahdo aabihii ayaa reerka u safri jiray.
Ileen ninkii aan dhiman waaya dhibaato waa u hurti la’aane, maalintii dambe ayuu aabihii allaystay, isgana irrido howleed oo hor lihi ku furmeen. Markii Jiilaal dhaartay, caanana jeesteen ayuu reerkii usoo safray isagoo neefaf adhi ah wada. Jidkii haddii ay soo mareen ayuu baabuurkii ay fuushanaayeen mar qudha jirjircadka iska rogey. Intii hadhuubkood buuxsamay way geeriyootay. Faaraxse dhaawac uu la miyir doorsoomay oo aan nabar muuqda lahayn ayaa gaadhay. Markiiba waxaa goobtii guuldaradu ka dhacday usoo gurmaday dadkii meelahaa ka dhawaa iyo baabuurtii wadada marayey. Faarax iyo dhaawicii kaleba waxaa degdeg loogu daadgureeyey cisbitaalkii ugu dhowaa.
Laba maalmood ka dib ayuu miyirsaday oo wax kala gartay. Markiiba waxay ishiisu ku dhacday waxyaalo aanu weligii il saarin. Sariiro dhar cad lagu dedey, dhalooyin sariiraha qaarkood kasoo kor deldellaa iyo dad sariirahaa ku dul jiifay.
Isaga oo aad u yaaban ayuu nin sariir u dhowayd ku jiifay oo Manaxe la odhan jiray waraystay oo yidhi “war bal meesha iiga waran?” “Meeshani waa aakhiro” “Waa xaq” Faarax baa isdhiibay, isaga oo aad u naxsan. Cabbaar markii uu aamusnaa ayaa nin dhakhtar ah oo cad iyo gabadh kaaliso ahayd oo iyaduna dhar cad xidhnayd qolkii Faarax jiifay soo galeen oo dadkii safkii Faarax kasoo horjeeday yiilay tooyasho iyo wax u qabad ku billaabeen. Waxaa kale oo uu arkay gabadh iyaduna dhar cad qabta oo cuno dadka u qaybinaysay.
Illeen la yaab ma lehee, intuu is hayn waayey ayuu Manaxe la hadlay oo yidhi “war kuwanina maxay ahaayeen?” “Waa malaa’igtii qof walba wuxuu kasbaday siinaysay” Manaxaa miskiinkuu kusii dhallaaliyey. “Waa xaq” ayuu Faarax ma labaad yidhi. Waxaanad aqoon u lahayniba waa ballaayo adduune, wuxuu haddana arkay dad qolka qalliinka la geeynayo oo rabrab ama dhooliyaal lagu walwaalayey. Markaas inta uu jiifkii sidii wax boodaya ka hinqaday ayuu Manaxe ku yidhi “Kuwaana xaggee loo wadaa?” “Waa qoladii la xisaabay oo cadaabta iyo jannada ayaa loo kala dirayaa.” “Waa xaq ayuu Faarax sidiisii ku celiyey.”
Naxdin iyo argagax inta uu Illaahay isugu keenay Faarax ayuu daaqad wejigiisa ku beegnayd eegay wuxuuna arkay awr afar ahayd oo cisbitaalka xaabo u sidday. Manaxe oo markaas inuu kaco oo uu soo fooldhaqdo u kaankaansanayey ayuu su’aal kale ku celiey oo yidhi “war awrtan aakhiro joogtana maxay ahayd?” “Waxay siddaa xaabadii cadaabta lagu shidi lahaa.” Ayuu ugu jawaabay Manaxe, isna geddiisii “waa xaq”
Muddo yar ka dib ayey dhakhtarkii iyo kaalisadii sariirtii Faarax soo gaadheen oo intay kaadhkiisii qaadeen daawooyin ugu qoreen iyaga oo aan afka u kala qaadin! Markii ay ka tageen ayuu Manaxe weydiiyey oo yidhi ‘war maxay anigana ii qoreen?” “Cadaabta” Manaxaa degdeg ugu jawaabay.
Hal cabbaar ah markii uu fakarayey ayuu Faarax intuu xanuunkii hayey iska ilaaway degdeg u kacay oo irrida ka booday. Deetana orod buu is qaaday isaga oo doonayey inuu caddaabta cago kaga baxsado. Shaqaalihii isbitaalku markay orod ku gaadhi waayeen ayaa baabuur Booliisku lahaa lagu eryey oo sariirtii lagu soo celiyey isaga oo lahaa “haddii aan ifkii camal fasho, Malaa’igta cadaabku cago iguma gaadheen. Faarax dadku waxay u qaateen inay jugtii gaadhay wax u dhintay, cidina ma aanay waraysan.
Waxaan kasoo guurinay buuggii suugaanta ee fasalka 9aad ee billowga dugsiga sare.
Murtida Qamaan Bulxan